Ofwa nke Social Media Monitoring na nchịkọta | Martech Zone
Ihe mbu nke ihe omuma banyere ihe omuma a bu ihe na-adọrọ adọrọ… uto nke nchịkọta ahịa ngwá ọrụ. N'uche nke m, ọ na-arụtụ aka n'okwu metụtara di na nwunye. Nke mbu bu na anyi nile ka na acho ngwa oru ka nma ikwuputa ma leba anya na usoro ahia anyi na nke abuo bu na anyi di njikere itinye oke onu ahia nke ahia ahia anyi iji hu na usoro anyi na aru oru.
Ka anyị na-eji mgbasa ozi mmekọrịta anyị na ndị ọzọ jikọọ, anyị na-ekepụta ụzọ data dijitalụ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Mgbe enyochachara nke ọma, data a bara uru nwere ike igosipụta echiche ọha na eze na usoro ndị na-azụ ahịa, mee amụma ma nye nghọta. Maka ụlọ ọrụ na-achịkọta ma nyochaa data a, ọ nwere ike ịbụ isi ihe ịga nke ọma. Nke a ozi sitere na Mmetụta Metric Ezubere iji nye òtù dị iche iche ozi banyere ụwa nke nlekota na nyocha mgbasa ozi mmekọrịta.
Ihe omuma ihe omuma a abughi ihe ohuru, mana o ka na enweta oke oru nke m achoputaghi. Ọ na-eju m anya mgbe niile na ọtụtụ nyiwe m amatabeghị banyere nke anyị!
BrandID - nyochaa akara gị na Youtube.
Denye - elu oyiyi nchịkọta na algorithms mmata maka mmesa mgbasa ozi.
Mmekorita - A ezigbo oge ikpo okwu maka na-elekọta mmadụ ahịa ọrụ na njikọ aka ahịa.
Hootsuite - bipụta, nyochaa ma jikwaa mgbasa ozi gị na azụmahịa gị na ikike Enterprise.
Ichoputa (na mbụ Statigr.am) - igodo usoro gbasara akaụntụ Instagram gị.
Komfo - na-egosi gị malitere ịrịa mmụba ma ọ bụ iru nke posts gị.
Njikọ Njikọ - ọgụgụ isi mgbasa ozi mmekọrịta maka ụdị na ụlọ ọrụ.
Piqora - soro mgbasa ozi dabere na onyonyo gị site na Pinterest, Tumblr na Instagram.
Ngwunye ọkụ - Nlekọta mgbasa ozi mmekọrịta na iji ige ntị na nyocha amụma.
Nanị na-atụnyere - Cross-ọwa na-elekọta mmadụ media nchịkọta tinye n'ọrụ site n'elu ụdị.
Sysomos - omimi omimi
gafee nke gị, akwụ ụgwọ ma kwụọ ụgwọ soshal midia.
Tently - Tụlee ọrụ ụmụazụ gị iji chọta oge kacha arụ ọrụ ụbọchị ịkekọrịta.
Chọọ maka ụfọdụ ederede blọgụ n'oge na-adịghị anya na ụfọdụ nyiwe ndị a!
Tags: Analyticsakaragwọọchọọ metricosohootsuiteiconosqarekomfonjikọnetbasePinterestọkpọkọnanịmeasurednchịkọta mmadụ mgbasa ozinlekota oru mgbasa ozistatigr.amihe onyonyosysomosogeWolfram Alfayoutubezfr
Ọgọstụ 11, 2014 na 1:25 ehihie
Daalụ maka ime ka Sysomos pụta ìhè na ebe a Douglas!
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu, nweere onwe gị ịkpọtụrụ m ma ọ bụ kpọtụrụ anyị site na webụsaịtị anyị.
Nọvemba 11, 2014 na 5:43 nke ụtụtụ
Ezigbo infographic na ihe ọmụma. Ị nyela ezigbo nghọta na ọ bara ezigbo uru. Na mgbakwunye na ngwaọrụ ndị ị kpọtụrụ aha na infographics dị n'elu, ọ ga-amasị m itinye Plumlytics. Plumlytics na-enye njikwa mgbasa ozi mmekọrịta yana nge ntị zuru oke yana nyocha amụma etinyere.
Nọvemba 11, 2014 na 8:54 nke ụtụtụ
Daalụ Piyush – Anyị atụkwasịla Plumlytics na ndepụta ahụ!